कोरोना अपडेट – Sandesh Munch
इ’टालीको झल्को : कोरोनाले एकै परिवारका ३ जनाको मृ’त्यु
तनहु। छोराहरुले दुईसाता अघि बिरामी भएका सय वर्षीय बाबुलाई अस्पताल भर्ना गरे। बाबुको उपचार हुँदै गर्दा चारै जना छोराहरू तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई क्रमश कोभिड १९ देखियो। यत्तिकैमा कोरोना संक्रमणकै कारण एक साताको अन्तरमा बाबु र २ छोराहरूसहित ३ जनाको मृत्यु भयो। यो दर्दनाक घटना हो, तनहुँ भिमादको। एकताका इटालीमा हुने गरेको यसप्रकारको मृत्यु घटनाको झल्को दिने गरी ३ जना सदस्यको मृत्यु भएपछि सिंगो भिमाद शोकमा डुबेको छ। जेठा छोरा र माहिली बुहारी पनि काठमाडौंमा भेन्टिलेटरमै उपचार गराइरहेका छन्। तनहुँको साबुङ हाल घिरिङ गाउँपालिकाका धर्मकुमार श्रेष्ठको परिवार पहिले नै पहाडबाट तराई झर्यो ।खेती किसान मुल पेसा थियो। परिवारमा श्रीमती, ४ छोरा र १ छोरी थिए। समयक्रममा जेठा छोरा रामकुमार काठमाडौं बस्न थाले। प्रगतिशील साहित्यकार उनी साहित्यमा राम विनय नामले चिनिन्छन्। लामो समय कृषि विकास बैंकमा काम गरेप
भर्खरै काठमाडौं उपत्यकाबाट आयो यस्तो दुखद खबर
हाल देशभर ५७ वटा प्रयोगशालाबाट आरटि पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ । ४० वटा सरकारी र १७ वटा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएदेखि हालसम्म ११ लाख ३१ हजार ९५८ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । जसमध्ये ९८ हजार ६१७ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार अद्यावधिक गरेको आँकडाअनुसार हिजो देशभर १८ हजार ४७३ मध्ये पीसीआर परीक्षण गरेकामध्ये १६ हजार ६५९ जनाको नतिजा आएको छ । नतिजा आएकामध्ये ४ हजार ३६४ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । बिहीबार पीसीआर गरिएकामध्ये २६ प्रतिशतलाई कोरोना पुष्टि भयो । एकैदिन यतिधेरै संख्यामा संक्रमित थपिएको नेपालमा महामारी सुरु भएयताकै पहिलो पटक हो । सबैभन्दा धेरै संक्रमित बागमती प्रदेशमा छन् । बागमती प्रदेशमा ११६९३ हजार २५२ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा २ हजार ९३३ जनालाई कोरोना पुष्टि भयो । बागमती
२४ असोज, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार बेलुकी ज्वरो आएपछि मन्त्री भट्टराईले शनिबार स्वाब दिएका थिए । आफ्नो रिपोर्ट पोजेटिभ आएको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् । ‘हालसम्म हल्का ज्वरो बाहेक अरु समस्या देखिएको छैन’ उनले भनेका छन् । नले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सतर्क रहन र कुनै समस्या देखिए परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापालाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। यही असोज १९ गतेदेखि बस्‍न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि गरिएको पिसिआर परीक्षणबाट उनमा शनिबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि उनमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। यसअघि उनका ससुरासमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीसहित ६ जना नेतामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। केसीसहित केन्द्रीय सदस्यहरु शम्भुलाल श्रेष्ठ र कल्पना चौधरी लगायतलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरुसहित केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी र नेताहरुका सुरक्षागार्डसहित २ सय ४१ जनाको स्वाब संकलन गरेको थियो। शुक्रबार संकलन गरिएको स्वाबको शनिबार रिपोर्ट आउँदा उनीहरुमा संक्रमण पाइएको हो।
एकैदिनमा २७२२ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि
१६ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७२२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा १४ हजार ७३९ नमुना परीक्षण गर्दा ९६५ महिला र १७५७ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ८२ हजार ४५० पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ५२० जनाको मृत्यु भएको छ भने ६० हजार ६९६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ३३०७ जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देशभर २१ हजार २३४ सक्रिय संक्रमित छन् । उनीहरुमध्ये ११ हजार ७६० होम आइसोलेसनमा छन् । ९ हजार ४७४ संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये २१० जना आईसीयू र २९ जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । कहाँ कति थपिए संक्रमित ? मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ६३८ संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौंका १२८० जना, भक्तपुरमा १९६ र ललितपुरका १६२ जना
काठमाडौं उपत्यकामा थप ८१७ जनालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ८१७ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६४९, भक्तपुरमा ३६ र ललितपुरमा १३२ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । आज देशभर १ हजार ३५१ लाई कोरोना पुष्टि भयो । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७४ हजार ७४५ पुगेको छ । जसमध्ये ५४हजार ६४० जना उपचारपछि निको भएका छन् । २४ घण्टामा ७४२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । २४ घण्टामा १० हजार ८० जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ ।
१ असोज, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज रामगढवाकी २६ वर्षीया महिलालाई शनिबार अचानक स्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । हल्का ज्वरो आउनुका साथै खोकी पनि लागिरहेको थियो । आफन्तले तुरन्तै सीता अस्पताल पुर्‍याए । ती महिलाको गर्भको नियमित जाँच गरिरहेको प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा‍. निलम चौरसियाले स्वास प्रश्वासको समस्या भएकाले जनरल फिजिसियनलाई देखाउन सल्लाह दिइन् । त्यसपछि उनलाई एडभान्स अस्पताल लगियो, त्यहाँ डा. उदयनारायण सिंहले जाँच गरे । जाँच गर्दा कोभिड संक्रमणको शंका लागेपछि पीसीआर परीक्षणका लागि नारायणी अस्पताल पठाएको डा. सिंह बताउँछन् । प्रयोगशालाले अपरान्ह ४ बजेतिर उनलाई कोरोना संक्रमण भएको खबर गर्‍यो । गर्भवती, त्यसमाथि लक्षणसमेत भएकाले नारायणी अस्पतालले कोभिड अस्पताल लैजान सुझाव दियो, तर नेसनल मेडिकल कलेज कोभिड अस्पतालले राख्न नसकिने जवाफ दियो । आफन्त अलमलमा परे । गुनासो गर्न जिल्ला प्रहरी कार्य
११ असोज, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । १९औं अनसनमा रहेका डा. केसीलाई भेटेकी त्रिवि चिकित्साशात्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डीन डा. दिव्या सिंह शाहलाई शनिबार संक्रमण पुष्टि भएपछि केसीको पनि स्वाब दिइएको थियो । उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २९ भदौमा जुम्लामा अनसन बसेका डा. केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् र, उनको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ ।
सप्तरी । कोरोना भाइरसका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत एक जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । बिहिबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत ५५ वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवले बिहीबार बिहान उनको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । मृतक पुरूषमा भदाै ३१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनी होम आइसोलेसनमा बसिरहेका थिए । उनीसँगै सप्तरीमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
Posted in कोरोना अपडेट, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
६ असोज, काभ्रे । कोरोना संक्रमणका कारण काभ्रेको पनौती नगरपालिका–५ चौकोटकी एक महिलाको धुलिखेल अस्पतालमा सोमबार राति मृत्यु भएको छ । योसहित काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन महिला र दुई पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । पचास वर्षीया ती महिलाको कोरोना संक्रमणपछि धुलिखेल अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा १९ दिनपछि मृत्यु भएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कमाण्ड पोष्टका सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. नरेन्द्र झाले बताए । उनका अनुसार आमाशयको क्यान्सर रोगी महिला धुलिखेलमा उपचार गर्न आउनुअघि काठमाडौं मेडिसिटी अस्पतालमा ‘केमो’ लिने गर्दै आएकी थिइन् । हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाका दुई, पाँचखाल नपाका एक र धुलिखेल नगरपालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट पहिलोपटक काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत सिन्धुपाल्चोकको २९ वर्षीया